Xildhibaano ka tirsan Guurtida iyo Wakiilada oo ka dayriyay abaarta gobolka Salal | Somaliland.Org
Xildhibaano ka tirsan Guurtida iyo Wakiilada oo ka dayriyay abaarta gobolka Salal
June 30, 2012	HARGEYSA(Somaliland.Org)- Xildhibaano ka tirsan Goleyaasha Guurtida iyo Wakiilada oo ka soo jeeda gobolka Salal, ayaa ka dayriyay abaar baahsan oo ku dhufatay dhammaan jiidaha iyo degmooyinka Gobolkaasi. Waxaanay ku baaqeen in dadka abaaruhu tabaaleeyeen lala gaadho gurmad deg deg ah oo qaran.
Xildhibaan Jirde Daahir Maxamuud oo ka tirsan Golaha Guurtida oo ka hadlay shir jaraa’id oo ay maanta Mudaneyaashaasi ku qabteen magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay abaar ba’ani ku habsatay deegaanada Salal, taasi oo saamayn ku yeelatay dad iyo duunyabba.
“Waxaan leeyahay dhammaan deegaamada gobolka Salal oo dhan abaartu waa mid saamaysay, waxaanu ku baaqaynaa dadkaasi abaartu hayso in loo sameeyo gurmad caalamiya, mid qaran iyo mid qurbo-joogba in loo gurmado. Waa dad dhibaataysan ee waxaan u soo jeedinaynaynaa in dadkaasi loo gargaaro,”ayuu yidhi Xildhibaan Jirde.
Xildhibaan Jirde oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “Dhibaatadii abaartu way sii xoogaysatay oo xataa dhimasho ayaa imika la soo sheegayaa markaa waxaan Ganacsatada, dadweynaha iyo qurbo jooga Somaliland u soo jeedinaynaa inay dadkaasi u gurmadaan.”
Xildhibaan Cali Sheekh Ibraahim Aareeye oo ka tirsan mudaneyaasha Golaha wakiilada ee ka soo jeeda deegaanka gobolka Salal, ayaa sheegay in abaartan baahsan oo gabi- ahaanba masaysay deegaanada gobolka Salal.
“Waxaan Madaxweynaha ugu hambalyaynaynaa baaqii uu ka soo saaray abaaraha gobolka Salal. Waxaanu hambalyo u soo jeedinaynaa mahad naq cid kasta oo taakulo ka geysatay abaartan. Lama qarin taageeradii ay ka geysteen dadkii Jabuuti ka yimid waana u mahad celinayaa Somaliland iyo cid kasta oo taakulo ka geysataba,”ayuu yidhi Cali Aareeye.
Xildhibaanku wuxuu ku dooday in salaadiinta reer Awdal ee gudida abaaraha isku magacaabay aanay ku jirin xataa xubin ka tirsan deegaanka Salal. “Waanu ku hambalyaynaynaa Salaadiinta reer Awdal Gudida abaaraha ee ay sameeyeen hase yeeshee anagoo markii horeba wax ka tabanaynay imikaba qof reer Salal ahi kuma jiro gudidaasi sidii ay wax u qeybiyeenna iyaguu ILAAHAY kala xisaabtami doonaa oo aanu u daynaynaa hawshii ay qabteen.”
Waxa iyaguna halkaasi ka hadlay Md. Maxamuud Xirsi, Md. Maxamuud Cali Xaaji Xasan iyo Md. Axmed Waabari Maydhane oo dhammaantood ka tirsan Golaha Guurtida kana soo jeeda gobolka Salal waxaanay baaq u direen xukuumadda, Ha’yadaha caalamiga ah iyo dadweynaha Somaliland oo ay ku booriyeen in la samato-bixiyo dadka ku tabaaleysan abaaraha gobolka Salal.
Previous PostWasiir Ku xigeenka Amniga ee wasaarada Daakhiliga oo Tababar u xidhay Dambibaadheyaal Boolis ahNext PostBeerlaxawsigii Sheekh Shariif, Dhoola-caddeyntii Siilaanyo, Amakagii Puntland iyo Galmudug	Blog